अमेरिकी प्रतीक सबैभन्दा चिन्न तस्बिरहरू को जो धेरै मानिसहरू हृदयमा बस्नुहुन्छ, राष्ट्रिय विचार अवशोषित? स्वतन्त्रता, को मुर्ति ह्यामबर्गर, मिकी माउस। र, को पाठ्यक्रम, अंकल सैम! यसलाई (रूसी निकासी को विचार गर्न akin: Balalaika, भालु, वोदका, कावीयार) सधैंभरि संयुक्त राज्य अमेरिका आइपुगे जो हरेक पर्यटक को मन मा अंकित।
वर्ण को इतिहास
अंकल सैम गर्ने हो? यो अमेरिकी प्रचार पोस्टर को मुख्य चरित्र, वास्तवमा, छ। दृष्टान्त, नाजुक सुविधाहरू वृद्ध मानिस नीलो कोट र नक्षत्र चिह्नहरू संग जित्ने "अमेरिकी" फूल मा लुगा देखाउँछ। उहाँले sternly हामीलाई सीधा देख र (शाब्दिक) यसो भन्छ: "! म अमेरिकी सेना लागि आवश्यक" तथ्य छ कि एक वर्ण अंकल सैम ब्रिटेन संग युद्ध समयमा, 1812 देखि अमेरिकी लोकगीत मा लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ रूपमा। एक संस्करण अनुसार, सेना लागि क्याटेरर शमू नाम एक व्यापारी थियो। पाठ्यक्रम, जो चाहनुभएको त्यसपछि लेबल सेना को लागि सबै भार (र अब चिनो लगाइएको छ) बोल्ड अक्षरहरू यू र एस मा, संयुक्त राज्य अमेरिका। (- संयुक्त राज्य अमेरिका तथापि, चमत्कारपूर्ण ढंगमा अंकल सैम decipher विनोदी गरयो संग coincided अंकल सैम)। यसैले यी कुराहरू को स्थिर अभिव्यक्ति। खुसीको कुरा, एउटा प्रबल सहायक अमेरिकी सैन्य राम्रो नाम छ!
अर्को पौराणिक कथा अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका सधैं अमेरिका भनिन्छ छैन। जो त्यहाँ अंकल सैम (यू शमू) छ USAm, - अर्को नाम अभ्यास। समय को Jokers को अभिलेखमा, यसैले त्यहाँ वाक्यांश थियो "डिकोड" गर्न "अंकल सैम।"
एक औंला पोस्टर संग
यो पहिलो (न त अन्तिम) आन्दोलन सेना लागि हो - म अंकल सैम भन्न पर्छ। तीन वर्षअघि (सन् 1914), ब्रिटिश यस्तै पोस्टर, यसलाई imprinting त युद्ध को मन्त्री, प्रभु Kitchener बेलायत उत्पादन। अंकल सैम को एक क्लासिक दृष्टान्त एक पोस्टर रूपमा पहिलो विश्व युद्ध को समयमा, 1917 मा डिजाइन गरिएको छ। र कलाकार (जे Flagg) यसरी सबै समय मा नै perpetuating, आफ्नो अनुहार वर्ण चित्रित। त्यसपछि त्यहाँ प्रसिद्ध र रेखाचित्र को फेदमा लेखिएको छ: "। तपाईं अमेरिकी सेना चाहनुहुन्छ" मामा शमू उसलाई अगाडि खडा, उसलाई एक औंला पोइन्ट रूपमा।
यो सोभियत संघ एक प्रसिद्ध पोस्टर मा यो विचार प्रयोग मा, "तपाईं स्वयम्सेवकको?" भनेर, तर रातो कट्टरपंथी मा नीलो र सेतो संग तस्वीर को रंग परिवर्तन रोचक छ। यी कुराहरू काम (डी मूर) चित्रित गर्ने कलाकार पनि नायक-Budennys एक प्रोटोटाइप रूपमा आफ्नो अनुहार प्रयोग, आफूलाई चित्रित। एक टोप र शाखागत pouches एक राइफल संग यहाँ एक सैनिक - महान देशभक्तिपूर्ण मूर को सुरुमा पुरानो पोस्टर नवीकरण गरिनेछ। विचार budonnovtsem संग एक पोस्टर, बारी मा, उधारो आई Toidze, जसले दोस्रो विश्व युद्ध को समय को प्रसिद्ध पोस्टर सिर्जना कलाकार - "मातृभूमि कल छ!"।
"अंकल सैम" सहित माथि संकेत, सबै, "ट्रयाक छवि" भनिएको छ जो मोडेल, मा बनाए। कलात्मक भ्रम, पुरातन समयका देखि प्रसिद्ध कलाकार, जो यस प्रकारको, कुनै पनि कोण मा चित्र देख, तपाईं वर्ण आँखा देख्न यदि कुनै पनि कोणबाट। को छाप उहाँले निरन्तर तपाईं हेरिरहनुभएको छ भन्ने छ। को प्रचार प्रचार सामाग्री जस्तै प्रविधी उपस्थिति को मनोवैज्ञानिक प्रभाव, बाहेक मानव मस्तिष्क मा काम गर्न बृद्धि गर्न डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ। तस्विर ट्रयाकर बनाउन, अगाडिबाट एक व्यक्ति आकर्षित। को मुर्कुट्टा दर्शक सीधै गरिएको छ। एक Gaze सीधा अगाडि निर्देशित छ। यसरी इच्छित प्रभाव हासिल।
आज मामा शमू
, पनि overalls वा जिन्स मा दैनिक लुगा प्रदर्शित गर्न सकिन्छ: क्लासिक, आधुनिक मोड को सबै-सम्मान छवि कहिलेकाहीं केही परिवर्तन undergoes। तर यहाँ सिलिन्डर, सय वर्ष पहिले एक जस्तै हो परम्परागत रहिरहन्छ छ। यो यस्तो आवश्यकता छ जसले ख्याल - थियो र अझै पनि मामा को मुख्य विशेषता छ रूपमा अपरिवर्तित। गरिब वा दुःख गर्न "अंकल सैम तपाईंको फिक्री गर्नुहुन्छ", हरेक अमेरिकी गर्न परिचित पनि वाक्यांश ज्ञात।
छवि perpetuate गर्न
सेप्टेम्बर 1961 मा, अमेरिकी कांग्रेस अंकल सैम को एक प्रोटोटाइप रूपमा शमू विल्सन celebrates एक संकल्प पारित। कसरी घटनाहरू भयो भन्छ जो व्यापारीले स्मारक स्मारक, को गृहनगर मा। यस्तो र ट्रय शहर मा "अंकल सैम" को गम्भीर मा। वर्ण को मूल बारेमा बहस यो दिन रोकिंदैन। त्यहाँ नयाँ संस्करण, वैकल्पिक सिद्धान्त हो। पक्कै पनि सही इतिहास भए तापनि शायद कहिल्यै पत्ता लगाउन छ!
व्याख्या र विडंबना
मा मामा को उज्ज्वल छवि सकारात्मक प्रचार गरे जब, सैन्य गर्न विरोध रूपमा शान्ति समयमा, प्रचार टिप्पणीहरू, कार्टून र Parodies, जस्तै (जस्तो देखिने) "defaming" अंकल सैम नाम धेरै सिर्जना गरियो। तर यो त छ! मानिसहरूको मन नकारात्मक प्रचार पनि राम्रो प्रभाव पछि। जहाँ विरोधी-अमेरिकी विचार, पोस्टर मामा अक्सर अमेरिकी इम्पेरियल महत्वाकांक्षा चित्रण गर्न प्रयोग ती देशहरूमा। यसको विरोधी वैश्वीकरण प्रदर्शन र pickets पनि हो मा कहिले काँही संग अंकल सैम को एक effigy बाल्न अमेरिकी झण्डा। तर, यो सबै बावजुद, अंकल सैम को छवि कहिल्यै थियो र नकारात्मक भन्दा बढी सकारात्मक रहन्छ।
Yaroslavl को सबै भन्दा प्रसिद्ध संग्रहालयहरु
राउन्ड टेबल (घटना) - निःशुल्क सम्मेलन। लागि सिफारिसहरू
7 जीवन परिवर्तन कौशल तपाईं भङ्ग हुनुहुन्छ भने पनि, लायक खरीद छन् कि
Spivak मारियाना Timofeevna: व्यक्तिगत जीवन, पति, फोटो, जीवनी, Filmography
पेललिम्पिक खेल भनेको के हो? पैरालिम्पिक एथलीटहरूको विशेषता के हो?
पार्क Geun-hye - दक्षिण कोरिया को पहिलो महिला राष्ट्रपति
किन बच्चाहरु को सपना?
तपाईं एक मकर मानिस कसरी जीत थाह छ?